Chenjedzo yekuisa masitepisi esimbi - China Foshan Hermes Steel
Masitepisi esimbi esimbi anozivikanwa mukati nekunze, uye zvakare ndeimwe yematanho anozivikanwa. Chii chatinofanira kuteerera kana tichiisa masitepisi esimbi?
1. Matanho ekumisikidza matanda esimbi isimbi
1. Kuiswa kwetirings kunofanirwa kuitiswa zvinoenderana nezvinodiwa uye marongero eiyo yekuvaka inki kumusoro kumusoro kubva pakutanga.
2. Matanda ari kumagumo maviri epuratifomu panotanga masitepisi anofanirwa kuiswa pekutanga, uye kuiswa kwacho kunofanira kuve kwakasungwa.
3. Panguva yekuvakwa kwewelding, tsvimbo yekumonera inofanirwa kugadzirwa neyechinhu chakafanana neyepasi zvinhu. Munguva yekumisikidza, iyo danda uye chakadzamirwa chikamu chinofanirwa kuve chakagadziriswa kwenguva pfupi nekutarisa kwemahara. Mushure mekukwirisa uye kururamisa kutwasuka, iyo simbi inofanira kunge yakasimba.
4. Kana mabhaudhi achishandiswa kubatanidza, maburi ari mundiro yesimbi iri pazasi pegomba anofanira kugadziriswa kuita maburi akatenderera kuitira kuti mabhaudhi ekuwedzera asawirirane nenzvimbo dzawo. Zvishoma zvigadziriso zvinogona kuitwa panguva yekuisirwa. Munguva yekuvaka, shandisa chibooreso chemagetsi kubaya mabhaudzi ekuwedzera pazasi peganda rekumisikidza, batanidza iyo pole woigadzirisa zvishoma. Kana paine kukanganisa mukukwirisa kwekumisikidza, gadzirisa nesimbi nhete gasket. Mushure mekutwasuka uye kukwirisa kururamisa, sungisa iyo screws. chivharo.
5. Mushure mekuisa matanda pamagumo maviri, shandisa nzira imwecheteyo kuisa matanda akasara nekudhonza tambo.
6. Kuiswa kwedanda kunofanirwa kuve kwakasimba uye kusasununguke.
7. Iyo pole pole uye bhaudhi yekubatanidza zvikamu zvinofanirwa kurapwa neanti-ngura uye anti-ngura mushure mekuisirwa.
Chechipiri, iyo yekuisa maitiro esimbi simbi stair handrails
1. Kuiswa kwakapinza simbi dzesimbi dzakasungirirwa
Kuiswa kwezvikamu zvakadzamidzirwa (zvakapetwa-zvakapetwa zvikamu) masitepisi ekukwiridzira akadzika midzi anogona chete kutora epashure-akadzika midzi. Iyo nzira ndeyekushandisa kuwedzera mabhaudhi uye mahwendefa esimbi kugadzira post-yakaiswa zvinongedzo. Kutanga isa mutsetse pachivako chevagari uye sarudza iyo ikholamu Gadzirisa chinzvimbo chepo, uye wozochera gomba pauriri hwezvikwiriso neyakagomara, uye wozoisa ekuwedzera mabhaudhi. Mabhaudhi anochengetedza hurefu hwakaringana. Mushure mekunge mabhaudhi amiswa, sungisa mabhaudhi uye sungisa iyo nati uye sikuruu yekudzivirira nati uye ndiro yesimbi kuti isasununguke. Kubatana pakati pesimbi uye kumadziro pamusoro zvakare kunotora nzira iri pamusoro.
Kuisa kunze nekuda kweyakarehwa pamusoro-yakasimwa kuvaka kunogona kukonzera kukanganisa. Naizvozvo, pambiru isati yaiswa, mutsetse unofanirwa kuradzikwa zvakare kuti uone kurongeka kwenzvimbo yakavezwa yeplate uye nesimbi yakatwasuka yakatwasuka. Kana paine chero kutsauka, inofanira kugadziriswa munguva. Inofanirwa kuve nechokwadi chekuti ese makoramu esimbi asina chigadziko akagara pamahwendefa esimbi uye anogona kusungwa akatenderedzwa.
3. Ruoko rwechigaro rwakabatana nekoramu
Pamberi pekumisikidzwa kwehandrail uye ikholamu inosangana nekoramu, mutsetse wakaiswa kunze kuburikidza netambo yakareba, uye groove inogadzirwa kumucheto wepamusoro zvinoenderana nekona yekukwira masitepisi uye kutenderera kwetsvimbo yakashandiswa. Wobva waisa handrail yakananga mukati megero yekoramu, uye woiisa nekutarisa nzvimbo kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe. Iwo epamberi ehandrails akaisirwa nenzira kwayo uye majoini akaomarara. Mushure mekunge mapaipi esimbi ari padhuze abvarurwa, majoini akasunganidzwa nemagetsi esimbi isina waya. Pamberi pekusimbisa, mafuta oiri, mabhureki, ngura nzvimbo, nezvimwewo mukati mehurefu hwe30-50mm padivi rega pesimbi inofanira kubviswa.
Tatu, kukuya uye kupukuta
Mushure mekusimudzwa uye mabhandara zvese zvakasunganidzwa, shandisa inotakurika kukuya vhiri chigayo kunyorovesa welds kusvika iwo ma welds asinga oneke. Paunenge uchipukuta, shandisa flannel kukuya vhiri kana kunzwa kupolisha, uye shandisa inoenderana polishing pasita panguva imwe chete, kudzamara zvazvakangoita zvakafanana nepedyo yepasi zvinhu, uye iyo yekumonera musono haisi pachena.
4. Mushure mekunge gokora raiswa, iwo magumo maviri erestrest yakatwasuka uye iwo maviri magumo etambo yakatwasuka anogadzikiswa kwechinguva nekutetepa kwemavara.